ဆေးကြောသန့်စင်စေပါ - ပြောင်းလဲခြင်းစံနမူနာ | Wash and Be Clean! | Real Conversion
ဆေးကြောစင်ကြယ်စေပါ - ပြောင်းလဲခြင်းစံနမူနာ
အောက်တိုဘာလ ( ၁၅ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
“သင်သည် သွား၍ယော်ဒန်မြစ်၌ ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ရေချိုး လော့။ အသားပြောင်း၍ သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။” ( ၄ ရာဇဝင် ၅း ၁၀ )
ဤသည်မှာ သာမန်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နက်နဲသောဆိုလို ရင်းရှိပါသည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မရောက်သေးလျှင် ထိုအကြောင်းကို ဂရုတ စိုက်နားထောင်ရမည်။ သင်သည် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ရမည်။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲ ဖို့ တစ်ခုတည်းသောလမ်းကို သင့်အား ညွှန်ပြလိမ့်မည်။
သာမန်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပြီး စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ တစ်ခုတည်းသောလမ်းကို သင့်အားပြသပေးရန် သမ္မာကျမ်း စာက ပေးထာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နေမန်သည် အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ရှုရိစစ်တပ်၏စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော စစ်တပ်ကို အုပ်ချုပ်ရသည်။ သူ့ကို ဘုရင်က ချီးမြှောက် သဖြင့် သူသည် မာန်မာနထောင်လွှားသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် အသက်ရှင်လျက်ပင် နူနာ ရောဂါ၏ကိုက်ဖြတ်စားခြင်းကို ခံနေရပါသည်။ သူသည် နူနာကြောင့် သေခါနီးအချိန်ဖြစ်သည် ကို သူကိုယ်တိုင်လည်း သိပါသည်။ သူသည် တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားအားထုတ်ပေမယ် နူနာရောဂါကို ကုသနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ဟေဗြဲကလေးမလေးသည် နေမန်၏အိမ်တွင် အလုပ်လုပ် သည်။ သူက နူနာကိုကုသနိုင်သည့် ပရောဖက်တစ်ပါး ဂျူးတိုင်းပြည်တွင်ရှိကြောင်း သူ့ကို ပြောပြခဲ့သည်။ သူသည် အရာအားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားခဲ့သော်လည်း သူ၏ရောဂါ သည် လုံး၀ပျောက်ကင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် နေမန်က “ဤပရောဖက်သည် ငါ့ကို ကု သပေးနိုင်သည်” ဟု စဉ်းစားလာမိသည်။ ၎င်းသည် သူကျန်းမာခြင်းရဖို့ နောက်ဆုံးအခွင့်အ ရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူသည် ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်ဧလိရှဲထံသို့သွားခဲ့သည်။
ပရောဖက်သည် ဘုရားသခင်၏လူအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ သူက ပရောဖက်သည် အိမ်ကထွက်လာပြီး နေမန်အပေါ်ဆုတောင်းပေးသဖြင့် အနာရောဂါငြိမ်းလိမ့်မည်ဟု ထင်မိ သည်။ ပရောဖက်က နေမန်အား သူ့ကို အနာငြိမ်းစေမည့်သူသည် သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်သည်ကို သိစေလိုသည်။ ထို့ကြောင့် နေမန်သည် ပရောဖက်အိမ်ရှေ့ သို့ မြင်းရထားဖြင့်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ပရောဖက်သည် ထွက်လာပြီး သူနှင့်စကားမပြော ပေ။ နေမန်အား အမှာစာသာ ပါးလိုက်သည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းက နေမန်ကို အမှန်တကယ် အမျက်ထွက်စေသည်။ “ဤပရော ဖက်သည် ထွက်လာပြီး ငါ့ကို ဘာလို့လာမကြည့်တာလဲ၊ သူ့ကို ဘာမှမထင်တာပဲဖြစ်မည်” ဟု တွေးမိသည်။ သူက ပရောဖက်သည် အိမ်ပြင်သို့ထွက်လာပြီး “လက်ကိုဝှေ့ယမ်းနှုတ် ဆက်ကာ နူနာတွေကို ကုသပေးမည်” ဟု ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ သူက ပရောဖက်သည် ဘင်နီဟိန်းကဲ့သို့မှတ်နေသည်။ သူက ကြွားကြွားဝါဝါရှိမည်၊ ယုံကြည်ခြင်းကို ကုသပေးသူဖြစ် မည်ဟု ထင်သည်။ သို့ရာတွင် ပရောဖက်သည် ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ ချီးမြှောက်ခြင်းအလုံးစုံကို ဘုရား သခင်အားပေးလိုသည်။ သူသည် နေမန်ထံသို့ သာမန်အမှာစာတစ်ခုသာ ပါးလိုက်သည်။
နေမန်သည် အလွန်ပင် အမျက်ထွက်သည်။ သူသည် အမျက်ထွက်လျက် စတင်၍ လှည့်ပြန် သည်။
ထို့နောက် နေမန်၏အစေခံက သူ့ကို “ပရောဖက်က သာ၍ခက်ခဲသောအလုပ်ကို ခိုင်းလျှင် အမှန်တကယ်လုပ်မည်လော။ သင့်အားပြောဆိုသောအရာကို အဘယ့်ကြောင့်မလုပ် လိုသနည်း။ ဆေးကြောစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်လော” ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက် နေမန်က “ကောင်းပါပြီ၊ ပရောဖက်ပြောသည်အတ်ိုငးလုပ်မည်” ဟုဆိုသည်။ သူသည် ယော်ဒန်မြစ်သို့ သွားပြီး ရေထဲသို့ မိမိကိုယ်ကို ခုနှစ်ကြိမ်နစ်မြှုပ်စေသဖြင့် “သူ၏အသားသည် သူငယ်၏အ သားကဲ့သို့ပြောင်၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၏။” ( ၄ ရာဇဝင် ၅း ၁၄ )
ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဒေသနာကြီးတွေကို ဟောကြားခဲ့ဖူးသည်။ စပါဂျွန် ကဲ့သို့သော တရားဟောဆရာကြီးများသည် နေမန်၏နူနာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသည် လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်သွန်းသော ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ခြင်းကို ပုံဆောင်သည်ဟု ဆိုကြသည်မှာ မှန်ကန်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ နားထောင်ပါ။ နေမန်၏ဇာတ်ကြောင်းက မည်သို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီး အပြစ်မှသန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက် မည်အကြောင်းကို ဤနံနက်တွင် သင်တို့အား ရှင်းလင်းပြသလိမ့်မည်။
၁။	ပထမအချက်၊ သူသည် နူနာစွဲသည်။
“သို့သော် နူနာစွဲ၏။” ( ၄ ရာဇဝင် ၅း ၁ )
သင်သည္လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် အပြစ်နူနာနှင့်ပြည့်နှက်နေပါ သည်။ အပြစ်နူနာသည် ပထမဆုံးအပြစ်ကျူးလွန်သူ၊ အာဒံထံက ဆင်းသက်လာပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဆိုသည်။
“အပြစ်တရားသည် တယောက်သောသူ(အာဒံ) အားဖြင့် ဤလော ကသို့ဝင်၍၊ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အ ညီ၊ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ရောက် ရကြ၏။” ( ရောမ ၅း ၁၂ )
ဤနံနက်ခင်းချိန်တွင် ကြီးမားသည့်ဖော်ပြချက်ပါတကား။ ဒေါက်တာ Watts က သင်၏အခြေ အနေမှန်ကို ဓမ္မသီချင်းစာသားထဲတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
သခင် ကျွန်ု္ပ်ဆိုးရွာ၊ အပြစ်နှင့်မွေးဖွါးလာ၊
မသန့်ရှင်း၊ မစင်ကြယ်ဘဲ လူ့ပြည်ရောက်လာ။
အပြစ်ကို ဦးစွာ ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်များ
လူသားစုအားလုံး၊ ကျွန်ု္ပ်တို့အားလုံး ပျက်စီးစွန်းထင်။
( ဒေါက်တာ Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ )
အပြစ်နူနာသည် သင့်၏ “အထဲတွင် နက်နဲစွာ တည်နေသည်။” ထိုအရာက ဤနံနက် တွင် သင့်ကို ဖော်ပြနေသည်။ “အပြစ်နူသည် သင့်အထဲတွင် နက်နဲစွာ တည်ရှိနေသည်။” ယေရှုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“လူအတွင်းနှလုံးထဲက မကောင်းသောကြံစည်ခြင်း၊ သူ့မယားကို ပြစ်မှားခြင်း၊ မိန်းမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်း၊ လူအသက်ကိုသတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်း၊ လောဘလွန်ကျူးခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ လှည့်စား ခြင်း၊ ညစ်ညူးခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ သူ့အသရေကိုဖျက်ခြင်း၊ ထောင် လွှားစော်ကားခြင်း၊ လျှပ်ပေါ်ခြင်း၊ ဤဆိုးညစ်သောအရာများတို့ သည် အတွင်းမှထွက်လာ၍ လူကို ညစ်ညူးစေကြသည်ဟု မိန့် တော်မူ၏….” ( မာကု ၇း ၂၁ - ၂၃ )
၎င်းမှာ သင့်စိတ်နှလုံး၊ မကောင်းသောအတွေးအခေါ်နှင့်ပြည့်နေသောနှလုံးသားကို ပုံဆောင် ထားပါသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်နူနှင့်ပြည့်နှက်နေပါသည်။
အဘယ်အပြင်ပိုင်းပုံစံကမျှ သင့်ကို မသန့်ရှင်းစေနိုင်ပါ။
နူနာသည် အထဲ၌ နက်နက်တွင် တည်နေသည် -
အတွင်းနက်နက်တွင်ရှိပါသလား။ အတွင်းနက်နက်တွင် ရှိပါသလား။ ရှိသည်ကို သင်သိပါ သည်။ ထို့အပြင် အဘယ်အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်က ( အပြင်ပန်းလုပ်ဆောင်မှု )) သင့်ကို မစင်ကြယ် စေန်ိုင်ပါ။ မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆုတောင်းခြင်းကမျှ သင့်ကို မစင်ကြယ်စေနိုင်ပါ။ သင်ခံ စားရသောအရာ၊ သို့မဟုတ် သင်ယူလေ့လာရသောအရာကမျှ သင့်ကို မစင်ကြယ်စေနိုင်ပါ။ ထုိအရာကို သင်သိပါသည်။ ( အပြစ် )) နူနာသည် သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် “နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တည်နေသည်။” ထို့အပြင် ထိုအကြောင်းကို သင်သိသည်။ ဟုတ်တယ်မလား။
ဤအရာမှန်ကန်သည်ကို သင်သိပါသည်။ သင်သည် အပြင်ပန်းအပြစ်ကို မကျူးလွန် ခင်ကတည်းက သိခဲ့ပါသည်။ သိလျက်နှင့်ပြစ်မှားကျူးလွန်ခဲ့သည်။ သင်လုပ်ဆောင်နေသော အရာအတိအကျကို သင်သိပါသည်။ သင်သည် မှားယွင်းကြောင်းသိလျက်နှင့် အဘယ့် ကြောင့် မှားယွင်းသနည်း။ သင်သည် မပြောင်းလဲသောအခြေအနေတွင် မှောင်မိုက်ကို နှစ် ခြိုက်ပါသည်။ အပြစ်ထဲ၌ ပျော်မွေ့နေပါသည်။ အပြစ်ကျူးလွန်သည်ကို ပျော်ရွှင်မိသည်။ ထိုအရသာကို စွဲလန်းနှစ်ခြိုက်သည်။ မကောင်းမှန်းသိလျက်နှင့် ချစ်ခင်ခုံမင်နေသည်။ သို့ဖြစ် သောကြောင့် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောသင့်စိတ်နှလုံးအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာတ ရားကို နားမထောင်လိုဘဲ ဖြစ်နေသည်။ သင်၏မကောင်းစိတ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာတရားပြောသည်ကို သင်တို့မုန်းတီးကြသည်။ မဟုတ်ပေဘူးလား။ သင့်ကို စီရင်သဖြင့် သမ္မာတရားကို နားထောင်ရန် စိတ်ပျက်စေသည်။ နူနာသည် အတွင်းထဲတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တည်နေသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြီး လမ်းလွဲစေသည်။ ကောင်းသောအရာနှင့် မှန်သောအရာကိုလုပ်ဆောင်သည်ထက် သင်သည် အပြစ်ထဲ၌ ပျော်မွေ့နေသည်။ အပြစ်နူ သည် မယုံကြည်ခြင်း၏ဆိုးသွင်းသောစိတ်နှလုံးသားထဲတွင် တည်ရှိနေသည္။ ကျွန်ုပ်က မဖော်ထုတ်တတ်ပါ။ သင့်စိတ်နှလုံးသားကဲ့သို့ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောစိတ်နှလုံးအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရာအားလုံးကိုသိရှိသောဆေးဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones ကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါသည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သန့်ရှင်းရမည့်နည်းလမ်းကို ပရောဖက်ပြောခြင်းအားဖြင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။
ပရောဖက်က “သွား၍ဆေးကြောလော့” ဟု ပြောသောအချိန်တွင် သူသည် အမျက် ထွက်သည်။ သူက [ “ပရောဖက်က ငါ့ကိုဆုတောင်းပေးမည်ဟုထင်သည် )] ဟု ဆိုသည်။ “အဲ လိုပဲထင်တယ်။” သင်က သင်လုပ်ဆောင်သောအရာသည် သင်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ် သည်ဟု ထင်သည္။ “ကျွန်ု္ပ်ထင်သည်။” သင်၏မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များကို လွှင့်ပစ် လိုက်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဟု သင်ထင်မှားနေသောအရာများကို လွင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ထိုအ ကြောင်းကို သင်လုံးဝမသိပါ။ Moody က ဤသို့ဆိုသည်။
နေမန်တွင် ရောဂါရှိသည်။ မာန်မာနနှင့်နူနာရောဂါဖြစ်သည်။ မာန် မာနသည် နူနာကဲ့သို့ ဆေးကြောရန်လိုအပ်သည်။ နေမန်သည် မာန်ထောင်စရာမြင်းရထားထက်မှဆင်းလာသည်။ ထို့နောက် အ မိန့်တော်အတ်ိုငး ဆေးကြောရသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းသည် ယနေ့နံနက်တွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကယ် တင်ခြင်းရလိုလျှင် လုပ်ဆောင္ရမည့်အရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ “သင့်အထင်” ကို စွန့်ပယ်ပါ။ သင့်မာနနှင့်ကယ်တင်ခြင်းရမည့်နည်းလမ်း သင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကို စွန့်လွှတ်ပါ။ သင့် အားမှာထားသည်အတ်ိုငး ဆေးကြောခြင်းခံရမည်။ “သွား၍ ဆေးကြောပါ…. သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။” ပျောက်ဆုံးပြီးအပြစ်နှင့်ပြည့်နေသောလူတစ်ဦးအနေဖြင့် ယေရှုထံသို့လာ ပါ။ ယေရှုထံသို့ အမြန်လာပါ။ သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသော အသွေး တော်အားဖြင့် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောသင့်နှလုံးသားကို ဆေးကြောပေးလိမ့်မည်။ “သား တော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏။” (၁ ယော ၁း ၇ ) “ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။” ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က သင့်အား ယခုပြောနေသော အရာဖြစ်ပါသည်။ “ဆေးကြောသန့်စင်စေပါ။”
သင်၏မာန်မာနကို မလျှော့ချသ၍ ဆေးကြောခြင်းကို ခံရမည်မဟုတ်။ သင့်စိတ်နှလုံး ပြောင်းလဲရမည်။ သင်သည် နောင်တမရသ၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရမည်မဟုတ်ပါ။ သင့် စိတ်နှလုံးသားသည် ပြောင်းလဲရမည်။ သင်၏တကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိုသောစိတ်ရှိရမည်။ သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်း စိတ်ချမှုလိုအပ်သည်။ သို့သော် သင်၏သရုပ်မှန်ကို မပြောင်းလဲစေလိုပါ။ သင်သည် ကယ်တင် ခြင်းသို့ရောက်လိုသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် တကိုယ်ကောင်းဆန်သောအသက်တာဖြင့် အ သက်ရှင်နေသည်။
ပြောင်းလဲခြင်းက စိတ်နှလုံး အပြည့်အဝပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကို ပြောသည်။ သင့်သဘာဝသည် မှားယွင်းနေသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးလည်း မှားယွင်းနေသည်။ သင့်သရုပ်မှန် သည်လည်း ပုတ်သိုးနေသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲက အပြောင်းအလဲသည် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပြီး သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုသေပြီး အသစ်သောအသက်တာဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွါးလာ ရမည်။ မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်စေသည်ထက် ဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်စေသည့်အသက်တာဖြစ်ရ မည်။ အပြစ်အနည်းငယ်ကိုသာစွန့်လွှတ်ခြင်းက အကူအညီပေးမည်မဟုတ်။ ဘုရားကျောင်း လာရုံသက်သက်၊ ဆုတောင်းရုံသက်သက်က အထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်။ အသစ်သော သဘာ၀၊ အသစ်သောအသက်တာရှိရမည်။
ပြောင်းလဲခြင်း၌ ရုန်းကန်မှုပြုသော John Cagan ၏ စကားကို နားထောင်ပါ။ “ကျွန်ုပ် ဖြစ်သမျှတွင် မောပန်းနွမ်းနယ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်အပြစ်ကို သိရှိသော်လည်း ယေရှုကို ပိုင်ဆိုင် ထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရန်ကြိုးစားအားထုတ်နေသည်။ ယေရှုကို ကိုးစား ရန်ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်း မကိုးစားနိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ် မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းက အကူအညီမဲ့စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်အပြစ်က ကျွန်ုပ်ကို ငရဲသို့တွန်းပို့နေ သည်ဟု ခံစားလာသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းမာခြင်းက ကျွန်ုပ်ကို အဝေးသို့တွန်းပို့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဒုက္ခပင်လယ်ပြင်ထဲ ဝဲကယက်နေသည်။”
ဒီမနက်တွင် တစ်စုံတစ်ရာ ခံစားချက်ရှိပါသလား။ ထိုသို့ရှိလျှင် အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်ပါသနည်း။ သင့်စိတ်ထဲတွင် အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုသောကြောင့် လည်းဖြစ်န်ိုင်ပါသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးအပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ခရစ်တော်ကို သင်လက်ခံလိုသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းမှာ ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ သင်သည် ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်။ မိမိကိုယ်ကိုထက် ဘုရားသခင်ကိုချစ်သည့် အသစ်သောနှလုံး သားရှိရမည်။ သင်သည် နောင်တရရမည်။ သင်၏သရုပ်မှန်ကို မုန်းတီးရမည်။ သင့်မာန်ကို ချိုး နိမ်ရမည်။ သို့မဟုတ် သင်သည် အပြစ်ထဲတွင် သေရမည်။ သင့်စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်နူက ထိန်းချုပ်နေပါသည်။ Jack Ngann က “သင်၏သရုပ်မှန်ကို ဘုရားသခင်က သင့်အား မုန်းစေ ရမည်” ဟုဆိုသည်။
နူနာသည် အထဲ၌ နက်နက်တွင် တည်နေသည်
Moody က ဤသို့ဆိုသည်။
John Cagan က “မိမိကိုယ်ကို ကြာရှည်စွာ မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ ယေရှုကို ထိန်းသိမ်း စေပါသည်။ ထိုအချိန်ခဏတာအတွင်း ယေရှုတွန်းလှန်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည်။ ကျွန်ုပ်လုပ် ဆောင်ရမည့်အရာမှာ သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားရန်ဖြစ်သည်မှာ ရှင်းလင်းနေပါသည်။ ကျွန်ုပ် သည် ကျူးလွန်သောအပြစ်ထဲကလှည့်ပြန်ပြီး ယေရှုတစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးစားစရာဖြစ် သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသမျှသောအပြစ်တို့ကို ယူဆောင်သွားသည်။ ထို့ နောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောပေးပါ သည်။ ကျွန်ုပ်အား အသစ်သောအသက်တာကိုလည်းပေးထားသည်။”
သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသည်နှင့်တပြိုင် နက်၊ “သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် သင့်အပြစ်အလုံးစုံမှ ဆေးကြောမူမည်။” (၁ ယော ၁း ၇ ) အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြောမည်။ အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြောမည်။ သင့်စိတ် နှလုံး၌ရှိသောအပြစ် သို့မဟုတ် သင်ပြစ်မှားသောအပြစ်၊ ရှိသမျှသောအပြစ်ကို ယေရှုအသွေး တော်အားဖြင့် ဆေးကြောမည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှု၏အသွေးတော်သာလျှင်ဖြစ် သည်။ သူသည် သင့်အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ အ ဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့ပြုသနည်း။ သူသည် သင့်ကို ချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်အ လုံးစုံကို အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောလိုပါသည်။
ကျွန်ု္ပ်ကို အဘယ်အရာက ကျန်းမာစေမည်နည်း၊
(“အသွေးတော်မှတပါးအခြားမရှိ” Robert Lowry, ၁၈၂၆-၁၈၉၉ ).
သင်သည် အပြစ်တရားထဲတွင် ကြာရှည်စွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်သည် John Cagan ကဲ့သို့ပင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိုသောဆန္ဒရှိပေမည်။ သူကဲ့သို့ဖြစ်ရန် တမ်းတနိုင် ပါသည်။ သို့ရာတွင် မဖြစ်နိုင်သောအရာဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ကံ ကြမ္မာ၏ပြုစားခြင်းကို ခံရသည်ဟု ထင်မိနိုင်သည်။ သင်သည် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ဟု လည်း ထင်စရာရှိပါသည်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့သည်ဟုလည်း ထင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ထင်မြင်ခြင်းမှာ မှားယွင်းပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်ကိုချစ်သည်။ သင့်ကိုချစ်သည်ဟု သိဖူး သောသူများထက် သင့်ကိုချစ်ပါသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ရှိသည်ဟု သိရလျှင် ချစ် တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ယေရှုသည် သင်မည်သို့ပင်ဖြစ်နေပါစေ ချစ်မြဲချစ်နေပါသည်။ ယေရှုက “ငါ့ထံသို့လာလော့၊ ….. အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လော့” ဟု မိန့် ဆိုထားသည်။ သူတောင်းဆိုသောအရာမှာ သင်၏ထောင်လွှားခြင်းမှပြန်လှည့်လာပြီး သူ့ကို ကိုးစားရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် တစ်နေ့တွင် သင်သည် ကောင်းကင်၌ သီချင်းသီဆိုရ လိမ့်မည်။
“ငါတို့ကိုချစ်၍ မိမိအသွေးနှင့်မိမိအပြစ်များကို ဆေးကြောတော်မူ ၍”။ ( ဗျာဒိတ် ၁း ၅ )
“ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။” မစ္စတာ Griffith ရေ၊ လာပြီး “ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိပါသည်” သီချင်းကို တဖန် သီဆိုပေးပါ။
သင်သည် စင်ကြယ်သောသူဖြစ်လိုလျှင် ရှေ့ထုံတွင် ထိုင်နေခဲ့ပါ။ ယေရှုကို ကိုးစား ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ု္ပ်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြပါမည်။
ဒေါက်တာ Chan ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့သို့လာပြီး သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါ။ ထို့ အပြင် မိဿဟာရဖွဲ့သည့်အခန်းထဲတွင် သုံးဆောင်မည့် အစားအသောက်အတွက် ချီးမွမ်းပါ သည်။ အာမင်။
“ကျွန်ုပ်သိပါ၏။"၊( , Anna W. Waterman ၁၉၂၀ ရေးစပ်သည်။ )
ဆေးကြောစင်ကြယ်စေပါ - ပြောင်းလဲခြင်းစံနမူနာအကျဉ်း
( ၄ ရာဇဝင် ၅း ၁၄ )
၁။	ပထမအချက်၊ သူသည် နူနာစွဲသည်။ ၄ ရာဇဝင် ၅း ၁၊ ရောမ ၅း ၁၂၊ မာကု ၇း ၂၁-၂၃ ။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သန့်ရှင်းရမည့်နည်းလမ်းကို ပရောဖက်ပြောခြင်း အား ဖြင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။ ၁ ယော ၁း ၇၊ ဗျာဒိတ် ၁း ၅ ။